Ukunyuka kweBaccarat ngokungekho mthethweni eTshayina – CYMRU
Ukunyuka kweBaccarat ngokungekho mthethweni eTshayina
No Comments on Ukunyuka kweBaccarat ngokungekho mthethweni eTshayina
IBaccarat yayikhe yenziwa stereotyped njengomdlalo wabantu abazizityebi abaphambili. Indawo eqhelekileyo ye-baccarat yayiquka amadoda kunye nabasetyhini abanxibe iimpahla zangokuhlwa, besenza i-100 yeedola kwiindawo ezixineneyo.
Nangona kunjalo, umfanekiso we-baccarat utshintshile kakhulu kule minyaka idlulileyo. I-baccarat encinci-uhlobo olusezantsi olubonisa itafile emgangathweni omnyama-iwenze umdlalo waziwa kakhulu kunangaphambili.
Abangcakazi baseTshayina sisizathu esikhulu sokuba i-baccarat itshintshe kakhulu. Abangcakazi abavela kwitafile yezikhukula kwilizwekazi kwihlabathi liphela.
Ngelishwa, nangona kunjalo, abadlali abafani abakwazi ukonwabela i-baccarat kwilizwe labo. Le meko idale imarike ye baccarat engekho mthethweni e China.
Ndiza kuxoxa ngakumbi malunga nothando lwase-China lwe-baccarat kunye nenkcubeko ephantsi komhlaba ephefumlelwe ngulo mdlalo.
Abangcakazi baseTshayina banjengoBaccarat bezizathu ezininzi
I-Baccarat ibonelela ngeenzuzo ezininzi kubagembuli baseTshayina. Apha ngezantsi, unokubona izizathu zabo ezithandekayo zokudlala lo mdlalo nokuba kutheni bezimisele ukuntywila umthetho ukuze bawenze.
I-Baccarat ikunika enye yamathuba afanelekileyo okuphumelela ekhasino. Ungayinciphisa indlu yongeza nje kwi-1,66% ngokwenza iwadi efanelekileyo.
Iimpawu ezintathu eziphambili ezikhoyo ze-baccarat wager zibandakanya:
Ukubheja kwebhanki – 1-6% kumda wendlu
Ukubheja komdlali – 1.24%
Ukubheja ngokudibeneyo – i-14.36% (w / 8-to-1 intlawulo) okanye i-4.84% (w / 9-to-1 intlawulo)
Ukubheja kwebhanki kusenokubonakala kunganomtsalane ekuqaleni xa kujongwa ukuba indlu ithatha i-5% ikhomishini iphumelele. Kodwa nokuba le khomishini iipesenti ezi-5, isenomgangatho wendlu eyi-1,06%-yenye yezona ziphantsi zekhasino.
Ukubheja komdlali kwakhona kukunika ithuba elifanelekileyo lokuphumelela ngokuphumelela kwendlu yakhe nge-1.24%. Yeyona ndlela intle ukuba uhlala udinwa kukungxola kwisandla sasebhankini ngalo lonke ixesha.
Ngokuqinisekileyo unokubona ukuba ukubethelwa kwesiteki kuyothusa ngokupheleleyo. Kubi kakhulu xa iintlawulo ezi-8 ukuya-1 zibandakanyeka kwaye azingabalulekanga ngentlawulo eyi-9 ukuya kwi-1.
Ngayiphi na imeko, i-baccarat inikezela ithuba elihle lokuphumelela ukubonga kubhengezo lwebhanki. Usebenzisa isicwangciso esifanelekileyo lo gama unamathela kule nto.
Abathengisi baseAsia bayayonwabela imidlalo yekhasino ebandakanya inqanaba elikhulu lethamsanqa. Baziva ukuba banokuphumelela imali eninzi ukuba ithamsanqa elifanelekileyo ikwicala labo.
IBlackjack ayimkhulu kangako kwiikhasino zaseMpuma njengoko kunjalo kwiindawo zokungcakaza zaseNtshona. Abadlali baseTshayina abayithandi indlela yokusebenzisa ubuchule obuninzi xa bedlala.
Bayayithanda indlela elula ebonelelwa yi-baccarat enokwenza i-wager yebhanki rhoqo. Ukusuka apha, badibanisa indlu ephantsi kunye nezinto zenhlanhla ukukhulisa amathuba abo okuphumelela.
Ibandakanya kakhulu i-8
Isibhozo linani lethamsanqa kakhulu kwinkcubeko yamaTshayina. Isisiseko iguqulela kubutyebi nakwimpumelelo.
Ke ngoko amaTshayina ahlala ekhangela ukuyibandakanya kuzo zonke iindlela zobomi-ngakumbi ukungcakaza. I-Baccarat iphakamisa ngokucacileyo inani lamanani asibhozo njengenye yeyona nto ibalaseleyo.
Njengoko usenokuba uyazi, isibhozo okanye isithoba kumakhadi amabini okuqala abizwa ngokuba “yindalo.” Umdlali okanye umphathi webhanki uzuza ngokuzenzekelayo xa inesibhozo okanye isithoba, kwaye elinye icala alinamanqaku afanayo okanye elingcono.
Ewe, ezilithoba zilunge kancinci kancinane kunezibhozo ngemithetho ye-baccarat. Kodwa umdlali wokungcakaza waseAsia uyayixabisa into yokuba isibhozo ngawona manqaku aphezulu.
IBaccarat ayikho mthethweni eTshayina
I-China ithatha indlela engqongqo kakhulu yokungcakaza. Bavumela kuphela iilotto zesizwe kunye nemidlalo yokufumana ukubheja kwezemidlalo. Yonke enye into ithathwa njengengekho mthethweni, ngakumbi imidlalo yeekhasino njenge-baccarat.
Ewe kunjalo, iMacau, indawo ekhethekileyo yolawulo eTshayina, ineekhompyuter ezininzi. Ikwatsala umvuzo wokungcakaza ngakumbi kunayo nayiphi na enye indawo emhlabeni.
Ingxaki neMacau, nangona kunjalo, kukuba ikunxweme olusempuma yelizwe. Uninzi lwabantu abukho kumgama ofanelekileyo wokuqhuba kule mecca yokungcakaza.
Ngenxa yoko, abanye abathengisi baseTshayina babhabha baye kwezinye izizwe bayokonwabela ukugembula kweekhasino. Esi sesona sizathu siphambili sokuba uninzi lwamashishini ezongcakazo zamazwe aphesheya abonise imidlalo enikezelwe ngokukodwa kubadlali baseAsia.
Mahjong, sic bo, kunye ne-baccarat zonke zingena kolu luhlu. Okokugqibela ingakumbi kubetha phakathi kwabadlali baseTshayina abaya phesheya.
Ngaphantsi komhlaba kweekhasino ngoku Dibana noMbango
Ungabona ukuba i-baccarat ayifikeleleki kangako kubemi abaqhelekileyo baseTshayina. Ewe kunjalo, ayinguye wonke umntu onokufumana ithuba lokuya phezulu kwindiza eya eLas Vegas, Macau, okanye eSingapore.
Iikhasino eziphantsi komhlaba ziye zavela ukwanelisa umnqweno wokungcakaza welizwe. Bahlala besebenza ngobunono ngasemva kwamashishini akhonza njengeefroni.
Ewe kunjalo, ngamanye amaxesha ezi Casinos zangaphantsi komhlaba ziyaqhuma. Kodwa ngaphandle kolo khuphiswano kwezomthetho, ezi Casinos zinoburhabaxa zithandwa kakhulu. Imfuno yabo ayibonakali ngathi izakuhamba nangaliphi na ixesha.
I-China ibonakalisa imithetho engqongqo yokulwa nongcakazo. Ke ngoko, abo baqhuba indawo yokungcakaza ngokufihlakeleyo bajongana nengozi enkulu xa besenza njalo.
Nditsho nabongcakazo ngokwabo bajamelana nexesha lejele kunye nezohlwayo ngokuhamba komthetho. Oko utshilo, uninzi lwabathathi-nxaxheba kwaye e
← Kutheni sicebisa ukuba sidlale iiSlots zaseNtlalontle → Emva kokhetho lwePatriots ‘ngaphandle, iiBhili ziZinto eziFunwayo ukuze uphumelele kwi-AFC eMpuma